मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनमा ओली र प्रचण्डबीच मतान्तर - नेपालबहस
मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनमा ओली र प्रचण्डबीच मतान्तर
| १३:१९:२८ मा प्रकाशित
१ असोज, काठमाडौं । पार्टीभित्रको कचिंगल मिलाएर प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिका लागि निर्वाध प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित बनाएका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली अब भने विवाद नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर उनी आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई यसै अवधिमा सुरक्षित बनाउने कसरतमा समेत लागेका छन् ।
त्यसैले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ लिएर उनी पूर्व एमालेमा आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई बलियो बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । यसका लागि ओलीले एकपटक फेरि पुरानै समीकरण बलियो बनाउने तयारी थालेका छन् । बामदेव गौतमलाई लिएर जाँदा नै आफ्नो पक्ष बलियो रहने बुझाई ओलीमा रहेको छ । त्यसैले उनले मन नलाग्दा नलाग्दै पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिश गरेका छन् ।
गएको सोमबार नै मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमको नाम सिफारिश गरेको चर्चा चलेपनि अहिलेसम्म शीतलनिवास नपुगेको बताइयो । गौतमलाई लात्ते भकुण्डो बनाउने काम फेरि दोहरिएको भन्दै ओलीको आलोचना बढ्न थालेपछि आज भने मन्त्रिपरिषद सचिवालयले उनको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । स्रोतका अनुसार, हिजो साँझ मात्रै गौतमको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । सम्भवतः आजै गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनित हुनेछन् । उनको शपथ भने भोलि वा आइतवार मात्रै हुने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
गौतमलाई संघीय संसद्मा प्रवेश गराएपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु हुने बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रियसभामा सिफारिश गरिसकेकाले अब गौतमलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन ओली तयार भएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालय भने उनले पाउने छैनन् । अरु नै कुनै शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा ल्याएपछि ओली सरकार “ग्रीन जोन” मा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
गौतमसँगै सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा ल्याउने ओलीको चाहना छ । त्यसो हुँदा सचिवालयमा उनको धेरै आलोचना नहुने र बाँकी अवधि सहजै पार लाग्ने अनुमान ओली पक्षले गरेको छ । आजबाट मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु हुने जानकारी प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेपछि त्यसलाई भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच सामान्य मतभेद रहेको बताइन्छ । ओली वर्तमान मन्त्रीहरुलाई नै निरन्तरता दिएर बलियो हुन चाहेका छन् । रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै थपेर जाने पक्षमा ओली छन् । तर प्रचण्ड भने कम्तिमा एक दर्जन मन्त्रीहरु फेरबदल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सकेसम्म सबैले मौका पाउन भन्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेको पनि निकट स्रोतले जनाएको छ ।
ओली भने अहिले भएका मन्त्रीहरुलाई चलाउने वित्तिकै अर्काे समस्या आउन सक्ने अनुमान गर्दै कम्तिमा ६ महिना निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका छन् । भोलि बस्ने सचिवालय बैठकको मूल अजेण्डा नै यही रहेको ओली निकट स्रोतको भनाई छ । तर आज साँझसम्म दुई अध्यक्षहरुले मोटामोटी एउटा मोडालिटी तयार गरिसक्ने पनि स्रोतको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओली जनमत राम्रो भएका र अवसर नपाएकालाई दिने भन्दापनि आफूलाई सहज हुनेगरी मात्र पुनर्गठन गर्ने पक्षमा रहेका छन् । त्यसैले उनी स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका प्रखर आलोचक भीम रावललाई समेत आफ्नो क्याबिनेटमा राख्न चाहन्छन् । रावललाई समेत समेट्न सक्दा उनलाई काम गर्न धेरै सहज हुने बुझाई छ ।
यस्तो मोडालिटी बन्दा चारचार पटक चुनाव जितेर एकपटक पनि मन्त्री हुन नपाएकाहरुले अवसर नपाउन सक्छन् । त्यस्तामा मकवानपुरका विरोध खतिवडा र कृष्णप्रसाद दाहाल पर्नेछन् । उनीहरु चारपटक चुनाव जितेरपनि मन्त्री बन्न नपाउने मध्ये रहेका छन् ।
आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड–माधव समूहको १० सिट पनि आउदैन : प्रधानमन्त्री ओली १७ घण्टा पहिले
माइतीघर घेरे पूर्व सांसद्हरुले २३ घण्टा पहिले
तीनमहिना भित्र सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोपः ओली २४ घण्टा पहिले
माउन्ट केटु म पनि जान पाएको भए धुमधाम हुन्थ्यो : प्रधानमन्त्री ओली २ दिन पहिले
कम्युनिष्ट र राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक मोड : प्रचण्ड २ दिन पहिले
डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकको त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक, अब्बल मानिएका बैंकको किन घट्दैछ नाफा ? ९ मिनेट पहिले
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य गिरावट ३२ मिनेट पहिले
अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पक्राउ ६ घण्टा पहिले
आठ वर्षमा मनोहरा करिडोर निर्माण सम्पन्न २३ घण्टा पहिले
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सप्तरीमा पनि शुरु २१ घण्टा पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय बिहुँकोट विकास मञ्च गठन २२ घण्टा पहिले
सुनको तोलामा ७ सयले घट्याे, चाँदीको भाउमा सामान्य गिरावट २३ घण्टा पहिले
काेराेना खोप यही माघ १४ गतेबाट लगाउन शुरु गरिने ६ दिन पहिले
मूल्यसूची नराखेका नौ व्यवसायिक फर्मलाई कारवाही १ दिन पहिले
एकै दिन बँदेलको आक्रमणबाट चार घाइते ५ दिन पहिले
चार वाणिज्य र दुई विकाससहित आधा दर्जन बैंकहरुकाे त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक, कुनको नाफा घट्यो कुनको बढ्यो ? २३ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पशुपतिनाथमा सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन ३ दिन पहिले
लिमीमा हिमपातले गर्दा पाँच महिनाका लागि आवतजावत बन्द २ हप्ता पहिले
चिया निर्यात आयोजनाले माग्यो कर्मचारी, यस्तो योग्यता भएकाले आवेदन दिन पाउने ? १ हप्ता पहिले
बलिउडकी बोल्ड नायिका बिपाशाकाे तीन कलाकारहरुसँग रोमान्स ! २ हप्ता पहिले
बागलुङमा ६८ र लमजुङमा ६० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण २ दिन पहिले
बर्डफ्लु देखिएपछि सीमा नाकामा उच्च सतर्कता ३ हप्ता पहिले
ओलीको सुरक्षार्थ धनगढीमा सेना परिचालन ३ हप्ता पहिले
कृष्णबहादुर महरालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति १ वर्ष पहिले
मालीमा साम्प्रदायिक हमला : ९५ जनाको मृत्यु २ वर्ष पहिले
बन्दाबन्दीमा एक हजार ११९ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित ६ महिना पहिले
पुष्प व्यवसायी मर्कामा, २० लाख बराबरको घाटा ९ महिना पहिले